Flybe nwere ike na-efe efe ọzọ na 2021
October 20, 2020 0 2 min gụọ
ife efe na nso nso a kwuru na ọ nwere ike na-efe efe ọzọ n'afọ ọzọ, mgbe ndị nchịkwa kwupụtara ọkwa na-aga nke ọma ejirila ndị na-etinye ego kwenye.
Flybe maliteghachiri ụgbọ elu dị ka afọ na-esote afọ ga-eweta nchekwube dị oke mkpa maka UK yana ọnọdụ akụ na ụba ya ugbu a. Agbanyeghị, ụgbọ elu ahụ kwesịrị izere imeghachi ihe mere na Machị gara aga site na ịmụ ihe site na mmejọ ya, ndị ọkachamara banyere ụlọ ọrụ ụgbọ elu dọrọ aka na ntị.
Flybe ejirila nlezianya tụlee isi ihe kpatara eji amanye ya ka ọ banye na mbido afọ a. Ntughari nke Flybe gara aga na-agbaso usoro uto ngwa ngwa tupu ọ banye nnukwu nsogbu. Ga n'ihu na ike ike dị egwu dị otú ahụ na ụgbọ elu ndị ọzọ na-ada n'akụkụ ụzọ dị oke egwu ma bụrụ nnukwu ihe na-akpata ọdịda ya.
Okwu ndị Flybe na-aga n'ihu nwere ike ịbawanye maka mbugharị ya n'ihi COVID-19. O dobeghị anya usoro atụmatụ ọrụ Flybe ga-adị, mana ọ nwere ike bụrụ na Flybe ga-achọ ịbawanye ahịa ya n'ụlọ. Flybe tụkwasịrị obi n'ọtụtụ ihe dị iche iche nke akụ na ụba na otu mba agwaetiti ka ọ na-agba ọsọ nke ọma iji nweta ọganiihu nke ọrụ, kama ịgbasa ọrụ ya karịa Europe iji belata ihe egwu a. Oké mmefu nke ndị na-azụ ahịa bụ ihe so akpata ọnwụ Flybe, nke a nwere ike bụrụ ihe ka njọ n'ihi COVID-19 na mmetụta akụ na ụba na-adịghị mma nke ọrịa a butere na ya.
Na mgbakwunye, ọ dị ka Flybe ga-abanyekwa n'otu ahịa asọmpi ahụ, nke dị ugbu a karịa n'ihi COVID-19. Ọnụ ego Flybe mere ka ọ rapara n'etiti etiti n'etiti ụgbọelu ọkọlọtọ UK - British Airways, na ndị na-ebu ọnụ ọnụ ala - Ryanair na EasyJet. Kemgbe Flybe hapụrụ ụlọ ọrụ ụgbọ elu, ndị isi egwuregwu na ụlọ ọrụ ụgbọ elu UK agbanwebeghị, ndị ụgbọ elu a ka na-eri nnukwu akụkụ UK ahịa.
Agbanyeghị, ohere dị - a na-echekwa njem nke ụlọ iji gbakee tupu njem mba ofesi, nke nwere ike ịda mma maka Flybe ma ọ bụrụ na ọ na-elekwasị anya n'ahịa UK. Airgbọelu ọdụ ụgbọ elu UK na-alụ ọgụ nwekwara ike ịdị njikere ịnye oghere maka ego dị ọnụ ala karịa ka ọ dị na mbụ, ọkachasị ka ụgbọ elu dịka EasyJet na-adọpụ ụdịrị ọnọdụ nke Flybe nwere ike ịbe, dịka Newcastle na Southend. Iji mee ka Flybe maliteghachi ịmaliteghachi, ọ dị mkpa ka ụgbọ elu ahụ jiri nwayọ na-eto. Ọ dị mkpa ka ọ nọgide na-enwe usoro iji nwayọọ nwayọọ na-eto eto iji nọgide na-arụ ọrụ na mgbanwe na ọnụahịa ndị isi na mmụba na asọmpi, nke nwere ike ime ngwa ngwa n'ihi ọnọdụ ọgba aghara nke ụlọ ọrụ ahụ.
Ọzọ na: Ryanair | Europe | ife efe | Covid-19
Ngalaba Njikwa Injin (ECU) Ahịa: Chain Uru, Ntụle Nlebaanya na Ọdịmma site na 2031 Covid-19|
Caribbean na-esonyere Airbnb Live na arụ ọrụ ebe ọ bụla mkpọsa
Ụgbọ elu Alaska kpọrọ onye ọrụ afọ iri atọ aha onye osote onye isi oche nke ọrụ ọdụ ụgbọ elu
Ụdị mkpokọta okomoko na-abịa na Cap Cana. Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Playa na ebe ntụrụndụ na Marriott International na-arụkọ ọrụ
Previous Ejiri ya site na nnabata ahụ ịzụrụ ike na uto ego buru ibu ma ga-eme ka mmepe ahịa paraffin na-ebuwanye ibu site na 2024
Osote Ndị mmekọ Wheels Up na International LGBTQ + Travel Association